Gịnị bụ ibu ọzụzụ pola? - Ọzụzụ
Isi > Ọzụzụ > Pola ọzụzụ ibu - keukwu akwụkwọ
N'isiokwu a anyị ga-egosi gị otu ị ga - esi chọta echiche zuru oke banyere ọzụzụ gị na Polar Training Load Pro. Ọzụzụ Ọzụzụ Ọhụrụ ọhụụ abụghị naanị otu, kama akụkụ atọ nke ibu ọzụzụ. Jiri nha ndị a tụnyere mmetụta nke gị, nke a na-akpọ dị ka ibu a hụrụ.
Maka ibu ọzụzụ ọ bụla, a na-enye gị ọnụọgụ ọnụọgụgụ nke na-egosi oke ibu zuru oke, yana nkọwapụta okwu na nha anya nke na-egosi etu o siri sie ike iji nnọkọ ahụ tụnyere ụbọchị 90 gị. Ọnụ ọgụgụ ahụ gosipụtara eziokwu ahụ bụ na otu ụdị ọzụzụ ọzụzụ ahụ nwere ike inwe mmetụta dịgasị iche na sistemụ obi gị dabere na akụkọ ọzụzụ gị na ọnọdụ ugbu a. Kaadị Cardio na-egosi mmeghachi omume obi gị na oge ọzụzụ.
A na-egosiputa ya dị ka ọzụzụ ọzụzụ, usoro anabatara n'ozuzu iji tụọ ibu ọzụzụ. Mgbapu na-agbakọ mgbe ọzụzụ ọ bụla sitere na data obi gị na oge ọzụzụ. Zọ kachasị mfe iji bulie ibu ca rdio gị bụ iji ọnọdụ ọnọdụ ibu ibu cardio na nlele Vantage Watchface.
Gị cardio ibu ọnọdụ dị mgbe ụbọchị atọ na ihe omumu ibu data. Ọnọdụ gị ga-abụ nke ziri ezi karịa oge. A na-emelite ya kwa ụbọchị na mgbe ọzụzụ ọ bụla.
Cardio ibu statuses bụ: detraining, na-akwado, na-arụpụta na-akarị. Mmekọrịta gị n'etiti nrụgide na ndidi na-ekpebi ụdị ọkwa ị nọ. Ọ ga - enyere gị aka ịchọpụta ma ị ga - abawanye ma ọ bụ belata ọzụzụ gị.
Nchegbu na-egosi otu ị si emega ahụ na nso nso a. Ndidi na-akọwa otú ahụ gị ga-esi na-azụ ọzụzụ ahụ. Ibu ibu na-egosi n ’ibu ọrụ gị kwa ụbọchị maka ụbọchị asaa gara aga yana ibu ị na-ebu kwa ụbọchị maka ụbọchị iri abụọ na asatọ.
Lelee ibu cardio gị na ngwa mkpanaka ma ọ bụ na ntanetị weebụ. Na mgbakwunye na ibu ibu can nwere ike inyocha etu obi cardio gị si arụ oge. Akwara Ibu bụ ibu na gị ọzụzụ oge na-etinye na gị na nkwonkwo na gị toning akpati.
Akwara Ibu bụ atụmatụ nke n'ibu ọrụ. Ọ na-agwa gị ole ọrụ akwara gị na-arụ. Ọ dabere na mmụba ike ma gbakọọ site na ịba ụba ike site na oge.
A na-agbakọ ụkpụrụ ibu akwara mgbe enwere ike data dị. Ka ọ dị ugbu a, ibu anụ ahụ dị mgbe ị na-agba ọsọ na ịgba ígwè. Site na Vantage V, a na - agbakọ ihe eji eme njem site na ọsọ gị ma barometer r na - ekpebi na ị tụọla elu ugwu na ụzọ gị.
Na Vantage M, ị nwere ike ịhụ ihe agbara mgbe ị na-eji ihe mmetụta ike mpụga. Na elekere abụọ, enwere ahụ ike dị n'oge mgbatị ịgba ígwè mgbe ị na-eji ihe mmetụta ike mpụga. Ibu nke atọ dabere na nzaghachi nke gị, eburu n'uche.
Omume a na-ahụ anya na-adabere na RPE: Ogologo Mgbatị Mgbatị, nke bụ usoro a na-ejikarị eme ihe iji chọpụta ike nke ọzụzụ ọzụzụ. Wee jiri usoro ihe omume a na-eme agbalite oge ọzụzụ gị. Kwesịrị, nnọkọ RPE kwesịrị-aza 30 nkeji mgbe ọzụzụ oge.
O yikarịrị ka rmance ahụ ọ ga-akawanye mma. Ọ bụrụ na ibu ndị a tụrụ atụ na ihe ndị a na-eche n’ibu amakọghị, ọ pụrụ ịbụ mgbaàmà nke ọrịa na-abịanụ, nrụgide, ma ọ bụ ihe ọzọ. Aghọtara ibu bụ a bara uru ngwá ọrụ, karịsịa mgbe na-ekpebi mmega ibu dabere na obi ọnụego naanị bụ ihe ịma aka.
Nke a na-abụkarị ikpe na ike na ọzụzụ ọsọ, ebe ọ bụ na sistemu cardio na-eme nwayọ nwayọ iji gbanwee ike n'oge ọzụzụ ọzụzụ dị otú ahụ. Ọzụzụ Ibu Pro na-enye gị a adaba n'ụzọ nyochaa ibu gị n'agbanyeghị nke gị egwuregwu ọzụzụ ibu site naanị otu ma ọ bụ ha niile; Have nwere ngwa ọrụ enyere gị aka iji ghọta nke ọma ma hazie mmega ahụ gị.
Kedu ihe bụ ezigbo ọzụzụ?
Lozụ ọzụzụbụ otu n'imePolarSmart ịnye ọzụzọ atụmatụ na-enyere gị gụpụta gịọzụzụ, mara oke nke aka gị ma mezie ike na oge mmega gị. Ọmụmaatụ,Lozụ ọzụzụna-eme ka mgbalị nke oge dị mkpirikpi, dị elu dị ka nke ogologo, obere ike.
N’echiche ya dị mfe, mmega ahụ bụ mmega ahụ ị na-eme n’izu. Ọ bụkwa metrik ejiri chọpụta ọnọdụ ọzụzụ gị n'ụzọ dịtụ iche, anyị ga-abịaghachi na nke ahụ n'isiokwu a, ike, nke nwere ike ịpụta ọtụtụ ihe, site na ọsọ ọsọ ọsọ gị ruo ibu ọzụzụ na gị Obi bu ihe ha nile gosiputara n'omume nile imere n'ime ubochi asaa gara aga site na iji igwe agarmin ma o gha achota oge ha kwesiri ibu oru ma choputa ma o bu gi ka odi nma.
Olu ọzụzụ gị bụ ngafe ikuku oxygen mgbe ị nwesịrị ọzụzụ ma ọ bụ Epoc sitere na ya wee tụọ ya dabere na obi gị. Izizi ọzụzụ gị bụ ngụkọta ụbọchị epoc maka ụbọchị asaa gara aga. Ikuku oxygen mgbe ọzụzụ bụ oke ikuku oxygen nke ahụ gị chọrọ iji weghachi onwe ya iji weghachite ọnọdụ ya kwesịrị ekwesị.
Zọ a na-emebu iji zụọ Epocs bụ site na nyocha ụlọ akwụkwọ mara mma, mana site na ngwaọrụ Garmin gị site na iji algorithm nke ya, ọ nwere ike gbakọọ otu data ahụ site na iji obi gị iji nye gị echiche nke ọnụọgụ oge dị ka a45 A nkeji na-agba ọsọ na 75 nke obi obi gi kacha nma gha eme ka onu ogugu nke 50 maka uzo di nma. N'ịmanye mgbalị na obere ihe na-erughị ihe dị ka 65 nke ọnụọgụ obi gị kachasị elu, epoc gị ga-ewulite nke nta nke nta ka ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ịnweta akara ngosi oge dị elu mgbe ị na-eme 15 nkeji oge na-adịghị agafe agafe karịa mgbe ị na-eme awa zuru oke na mfe Mgbalị maka ebumnuche nke isiokwu a. Lelee nọmba na data sitere na ngwaọrụ Garmin.
N'ezie enwere nyiwe dị iche iche, mana ụkpụrụ ndị bụ isi nke ibu ọzụzụ ka dị otu. You nwere elekere na ọrụ ndị a dị iche iche ma ọ bụ na enwere ihe doro anya gbasara ibu ọzụzụ ịchọrọ ịmara, mee ka anyị mara na nkọwa dị n'okpuru ebe a, anyị ga-eme ike anyị niile iji mee ka elekere gị gosipụta ihe ngosi akara ngosi nke ahụ na-egosi gị na oke gị kachasị mma dị n’etiti, ọ bụrụ na ị nọ oke aka nri, ibu gị dị oke elu na oke aka ekpe na ibu gị dị oke ala. Ihe kachasị mma bụ nke a kpebiri site na ahụike gị, nke na-egosi nke a na ka vo2max gị dị elu, ọ ga-eme ka ọnọdụ gị kachasị mma maka ọrụ mgbatị gị, dabere na ọmụmụ sayensị na-atụ aro na ihe kwesịrị ekwesị bụ, ọ ga-esiri gị ike ịzụ, kamakwa ihe siri ike ị ga-arụ ọrụ iji mee ka onwe gị na-agagharị Iji meziwanye, ọ na-agbanwe oge na-agbanwe ma gbanwee dị ka ọkwa ahụike gị dị, mana ka ị na-agagharị n'elu nke gị imchọ maka oke ya, nke a nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama na ịchọrọ dọghachi ya ntakịrị, ma ọ bụ ị nwee ike ịzụ oke ọzụzụ ma ikekwe iburu mmerụ ahụ.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị gbadaa na njedebe nke mpaghara kachasị mma, ị nwere ike ịhụ na oge eruola maka ịma aka ọhụrụ, yabụ na nke a abụghị ihe ị nwere ike iji onwe gị tụnyere. Dị ka anyị na-ekwu na-agba ọsọ ọwa tụnyere, onye ohi nke ọ joyụ bụ ma anyị chere na ọ ga-abụ ihe na-akpali mmasị n'ezie ịgwa gị ụdị nke mgbatị ibu nọmba ọkachamara egwuregwu nwere ike inwe ya mere kwa izu elites ga-ahụ a mgbatị ibu nke banyere otu puku na otu mgbatị, nke dị ihe dị ka mgbatị ise n'izu a na uru mgbatị mgbatị nke 200. Mgbe ị na-elele ọzụzụ ọzụzụ dị oke egwu site na otu mgbatị, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ ndị egwuregwu ntachi obi kachasị elu bụ ndị na-akụ 3 ruo 400 oge ụfọdụ.
Anyị achọghị ka ọnụọgụ ọnụọgụgụ ọnụọgụgụ gị, agbanyeghị, n'ihi na dịka ndị ọgba ọsọ, anyị nwere ọtụtụ ọnụọgụ enwere nke anyị nwere na ọ dị mfe ịnwale ihe kachasị mkpa, iji jigide ọrụ mgbatị oge niile ma debe ya na nke kachasị mma maka gị, yabụ na ị gaghị ida ahụ ike ma ọ bụ na-enwe ihe egwu nke ịmachịpụ ya mere echegbula maka ọnụọgụ, nkwụsi ike bụ isi ugbu a ọ bụ eziokwu, ịchụpụ onwe gị bụ maka nsonaazụ, mana ọzụzụ nke ukwuu na ọzụzụ nke ukwuu, nwere ike na-arụpụta ihe ma na-edugakwa na mmerụ ahụ. Ya mere lelee ọzụzụ ọzụzụ gị wee hụ ma ị na-emega ahụ pere mpe nke ukwuu. Ahụ ike gị nwere ike ịbawanye uru, nke pụtara na ị na-agbatị ma ọ bụ na-emebiga ihe ókè, yabụ megharịa nke ọma.
Achọpụtala m na ọ na - agwa gị na ịmịghị arụpụta ma ọ bụ na elu gị, na ị gaghị erute ọnọdụ ọzụzụ gị belụsọ ma ị ga - ahụ nguzozi ziri ezi n'etiti mmega ahụ na mgbake, ahụ gị chọrọ mgbake iji gbanwee, melite ma weghachite mmelite na ma gị ọzụzụ ibu na gị mma na mmalite nke a ọhụrụ omumu mmemme Ma eleghị anya, ị na-abịa site ezumike ma ọ bụ na-abịa azụ site na mmerụ, mgbe ahụ, i nwere ike iji gị ọzụzụ ọnọdụ na-elekwasị anya na elu ibu na a nnọọ smart ụzọ site na-eme Nọgidenụ anya na mgbatị gị dum iji kwe ka mmega ahụ gị na-ebuwanye ibu lei stung na-enyere aka. Iji data n'akụkụ mgbatị ahụ gị dị ezigbo mkpa na mgbatị gị ga-agbaji ụzọ atọ: Aerobic High Aerobic High Aerobic na Anaerobic Worko Focus Focus na-egosi gị otu mgbatị gị dabara na ngalaba ọ bụla maka ụfọdụ elekere ị nwere ike inweta ozi a dị na ngebichi nche gị na njedebe nke ịgba ọsọ, mana maka ndị ọzọ ị nwere ike ịnweta ya na data mmemme na ngwa Garminconnect n'agbanyeghị etu i si hụ ya, n'agbanyeghị na ị ga-enwe ike ịhụ mpaghara anaerobic gị pụta ìhè na-acha odo odo na Mata gị ala aerobic n'ógbè na-acha anụnụ anụnụ. Isi ihe na-eme ka ihe omumu gị na-eme ka ọrụ gị dị elu bụ ihe ndị na-eme ka obi gị dị elu nwere ike ịgụnye mgbatị ahụ dị elu nke na-esite na sekọnd ole na ole ruo minit ole na ole, agwakọta ya na oge mgbake dị ala iji belata obi gị. ọtụtụ oge ụfọdụ oge 30 ka ihe dị ka oge na-agba ọsọ obere ọzụzụ ọzụzụ bụ obere nrụgide.
Nke a bụ akụkụ nke mgbatị gị ebe ị nọ na-ekwu okwu ọsọ ka ị wee nwee ike ịkparịta ụka na enyi ma ọ bụ onye ọrụ ibe gị mgbe ị na-agba ọsọ ogologo oge, yabụ na nchịkọta, enwere ihe anọ dị mkpa ị kwesịrị ịma gbasara ọzụzụ ọzụzụ: Ikike ọzụzụ mbụ bụ metric dabeere na mmanụ nke jikọtara ibu nke ihe niile edere ede maka ụbọchị asaa gara aga, ma ị na-agba ịnyịnya ígwè ma ọ bụ otu ụdị dị iche iche nke epoc na-arụ ọrụ mmetụta nke ọrụ gị na nrụghachi ọrụ na ọrụ mgbanwe ị na-arụ. na nzaghachi maka mgbali siri ike. Nzaghachi ị nwetara site na mmega ahụ bụ nnukwu ngwá ọrụ iji chọpụta ma ị bụ onwe gị Mgbalị siri ike ma maa onwe gị aka iji zute ahụike na arụmọrụ gị niile. The ezigbo ihe omumu ibu n'ihi na ị bụ mgbe niile na onye kpebisiri ike site a Nchikota gị ugbu a mma larịị na gị ọzụzụ akụkọ, Olileanya a nyere gị a mma nghọta nke ihe omumu ibu maka ihe ọ bụ na otú i nwere ike iji ya na-a ndị na-agba ọsọ ka mma.
Ọ bụrụ n ’ị chọtara nke a bara uru, biko hapụ mkpịsị aka gị wee hapụ anyị okwu mgbe ọ bụla ị mụtara ihe ọhụrụ ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara nke a, ihe anyị kpuchie, jụọ u ns na nkọwa ndị dị n’okpuru ma emela ichefu lelee ufodu n’ime ihe omuma ndi ozo anyi no n’ebe a na agba oso
Gịnị bụ ibu ibu?
The ezigbo nso makaọzụzụ ibudị n'etiti. Ọ bụrụ na ị nọ n'aka nri nke ahụ ị ga-adị elu, na n'aka ekpe mgbe ahụibubụ oke ọkụ. Nwere ike ịhụ ebe ị nọ ugbu a ma mezie ya.
Olee otú ike ịzụ ibu gbakọọ?
Kedu ihe ọ bụọzụzụ ibuoleekwa otu ị ga-esi tụọ ya? NIC GILL:Ọzụzụ ọzụzụbụ otu n’ime ihe ndị ahụ ebe ọ bụ karịa nka karịa sayensị. Ọ bụ mmega mmega ahụ ị na-eme, nke a na-atụlekarị otu izu, enwere ike ịtụle ya site na ihe abụọ oge na ike. Oge dị mfe iji tụọ.
Kedu ka Polar si agbakọ oge mgbake?
Kedu ka ọ dịIweghachiteỌkwagbakọọ? GịIweghachiteỌnọdụ na-agwakọta Ikike Ọzụzụ gị na data na ọrụ ịmeekwa ụbọchị. A na-atụle ihe omume siri ike na / ma ọ bụ ogologo ogeMgbakeỌkwa. Ha na-abawanye ibu, gbatịkwuooge mgbakena-emetụta gịIweghachiteokwa.
Polar ignite nwere ọzụzụ ibu pro?
NaỌzụzụ Ibu Proatụmatụ jikoro otú gịọzụzụnnọkọ na-agbatị ahụ gị ma nyere aka ịghọta etu o si emetụta arụmọrụ gị. NaỌzụzụ Ibu Prona-enye gị aọzụzụ ibuọkwa maka obi obi gị Cardioibu, na aghọtaibuị nwere ike ịlele etu obi dị gị.
Gịnị bụ ibu na ibu ọzụzụ?
Ibubụ otu ihe siri ike nke aọzụzụnnọkọ ma ọ bụ oke nrụgide nnọkọ ahụ tinyere n'ahụ. Ihe atọ kọwaa nke a maka onye na-eme egwuregwu: Mpụgaọzụzụ ibu: ọrụ ma ọ bụ olu (ngụkọta anya ọsọ, ego nkeibu ibubulie, ọnụọgụ abụọ, jupụta ịlaghachi basketball, nkwekọrịta na bọlbụ, wdg)
Kedu ndị na-ekiri Garmin nwere ibu ọrụ ọzụzụ?
NaEburu ụzọ945 bụGarmin'sdakọtara na Vantage V. Ọ na-etinyekwa ọtụtụ atụmatụ ọhụụ, emere iji nyere gị akaụgbọ olokoecheta, gbakee nke nwere ọgụgụ isi ma bulie arụmọrụ gị na-agba ọsọ.Garmin'smbipute nke Polar'sọzụzụuru na-abịa mgbe ọ bụla na-agba ọsọ.
Gịnị bụ ụkpụrụ 5 nke ọzụzụ?
Iji nweta ihe kachasị nke gịọzụzụ, ikwesiri itinye yaiseigodoụkpụrụ nke ọzụzụnkọwapụta, ịkọwapụta onwe onye, ​​mbugharị na-aga n'ihu, mgbanwe na ịmara mgbanwe.
Gịnị bụ unit maka ọzụzụ ibu?
Naọzụzụmkpali (TRIMP) a na-ewerekarị dị ka ụzọ bara uru iji chọpụtaọzụzụ ibu. A TRIMP bụ ankejinke mgbatị ahụ a na-agbakọ ijiọzụzụoge na kachasị, izu ike, na nkezi HR n'ogemmega ahụnnọkọ.